वारेन्टी / सेवा - लिमिटेड शेन्जेन उज्ज्वल प्रौद्योगिकी कं,
उज्ज्वल पूर्व-बिक्री हाम्रो ग्राहकहरु लागि र बिक्री पछि-पूर्ण समर्थन प्रस्ताव। हाम्रो विभिन्न उत्पादन लाइनहरु समर्थन गर्न व्यापक अनलाइन संसाधन प्रदान गर्दछ। समर्थन खण्ड ब्राउज र आवश्यक जानकारी पाउन हुँदैन हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
आश्वासन, सेवा योजनाहरु र मर्मत
उज्ज्वल ठूलो समर्थन, प्रदर्शन उपरिकाल र इष्टतम प्रदर्शन प्रदान गर्दछ। सेवा को उच्चतम स्तर प्रदान गर्न, उज्ज्वल यसलाई आफूलाई गर्छ।
उद्योग-प्रमुख वारंटी उज्ज्वल नेतृत्व उत्पादनहरु संग मानक छन्।
उत्पादन सेवा योजनाहरु
तपाईंको आवश्यकता पूरा गर्न विस्तारित वारंटी को सुइट। महंगा मरम्मत र लामो downtimes आफूलाई रक्षा गर्न योजनाविद्य सेवा योजना मा लगानी।
तपाईंको सिस्टम सुनिश्चित गर्न प्रशिक्षित समर्पित टेक्नीसियन को उज्ज्वल गरेको वैश्विक नेटवर्क पहुँच, स्थापित छ इष्टतम स्तर कायम र मरम्मत।
आफ्नो उत्पादन ग्यारेन्टी र दोषपूर्ण बाहिर छ भने उज्ज्वल मर्मत सेवा एक विकल्प हो।
एलईडी उत्पादन मानक लिमिटेड वारेन्टी
एक उज्ज्वल नेतृत्व भिडियो पर्खाल आफ्नो खरीद मा बधाई छ! उचित स्थापना, सेटअप र हेरविचार संग, तपाईं अनुपम छवि गुणस्तर, विश्वसनीयता र प्रदर्शन को धेरै वर्ष आनन्द गर्नुपर्छ।
निम्न नियम र मानक लिमिटेड वारेन्टी को अवस्था हामीलाई बीच एक सम्झौता प्रतिनिधित्व, एलईडी भिडियो पर्खाल उत्पादन को निर्माता (शेन्जेन उज्ज्वल प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड "उज्ज्वल") र तपाईं, एक उज्ज्वल नेतृत्व भिडियो पर्खाल उत्पादन खरिद गरेको छ जो ग्राहक सीधा उज्ज्वल देखि वा उज्ज्वल अधिकृत वितरक वा बिक्रेता देखि। यो मानक लिमिटेड वारेन्टी निम्न परिवारबाट एक ढाकिएको उत्पादनको खरीद संग नि: शुल्क प्रदान गरिएको छ: उज्ज्वल भिडियो पर्खाल प्रदर्शित एलईडी।
यो मानक लिमिटेड वारेन्टी वा तल उल्लेख प्रभावकारी मिति पछि खरिद ढाकिएको उज्ज्वल उत्पादनहरु लागू हुन्छ। उज्ज्वल यो ग्यारेन्टी सर्तहरू परिवर्तन गर्न अधिकार। यस्तो परिवर्तन वा संशोधित ग्यारेन्टी को प्रभावकारी मिति पछि खरिद ढाकिएको उज्ज्वल उत्पादनहरु लागू हुनेछ।
भौतिक र कारीगरी मा कमजोरीहरू देखि •2वर्ष सुरक्षा
• प्रतिस्थापन भागहरु या उत्पादनहरु को विकसित ढुवानी (एलईडी टाइल्स बाहेक)
• 24x7 आकस्मिक फोन समर्थन पहुँच
उज्ज्वल आफ्नो उत्पादन तल प्रदान ग्यारेन्टी अवधिमा सामाग्री र कारीगरी मा दोष मुक्त हुन warrants। हाम्रो सङ्कल्प, एक उत्पादन ग्यारेन्टी अवधिमा सामाग्री वा कारीगरी मा दोषपूर्ण साबित भने, हामी मर्मत वा यस्तै नयाँ वा मर्मत भाग संग दोषपूर्ण भाग प्रतिस्थापन गर्नेछ। मुद्दा एलईडी उत्पादन संग एक निर्माण दोष ठानेको छ भने, हामी मर्मत वा हाम्रो विवेकमा मा दोषपूर्ण भाग प्रतिस्थापन गर्नेछ। मर्मत वा भाग वा उत्पादन को प्रतिस्थापन व्यावसायिक सम्भाव्य हुन हामीलाई निर्धारण गरिन्छ भने, हामी ग्यारेन्टी अवधि को शेष र एउटै वा को त्यसपछि-वर्तमान MSRP1 आधारमा खरिद मूल्य (गणना को एक स्थगन शेयर फिर्ता हुनेछ यस्तै उत्पादन)।
वारंटी अवधि मा, हामी कायम र समस्या हामीलाई पर्छ यदि दोष घटक, नि: शुल्क प्रतिस्थापन गर्नेछ। तर तपाईं दुवै ढुवानी शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ।
2 वर्ष पछि, हामी केवल भौतिक लागत शुल्क, तपाईं ढुवानी लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ।
वारेन्टी को लम्बाइ
सबै एलईडी भिडियो पर्खाल उत्पादनहरु उज्ज्वल देखि ढुवानी को मिति देखि दुई वर्ष warranted छन्। सबै सहायक र क्षेत्र बदली एकाइहरु (FRUs), तर केबल, Remotes, बिजुली आपूर्ति र नियन्त्रक बोर्ड सीमित छैन सहित प्रारम्भिक उत्पादन खरिदको समयमा खरिद एलईडी टाइल्स, उज्ज्वल देखि ढुवानी को मिति देखि तीन वर्षसम्म warranted छन्। सबै सामान र FRUs प्रारम्भिक उत्पादन खरिद पछि खरिद उज्ज्वल देखि ढुवानी को मिति देखि 90 दिनको लागि warranted छन्।
यो मानक लिमिटेड वारेन्टी उत्पादन उज्ज्वल वा उज्ज्वल अधिकृत बिक्रेता वा वितरक खरिद समेट्छ र केवल कवर उत्पादन खरिद गर्ने मूल ग्राहक लागि मान्य छ। यो बिक्रेता वा वितरक एक उत्पादन दोष को घटना मा आफ्नो तर्फबाट प्राविधिक सहायता सम्पर्क गर्न सक्छ। यो ग्यारेन्टी हस्तांतरणीय छैन। तपाईं खरीद प्रमाण प्रमाण प्रदान गर्न आवश्यक हुन सक्छ।
यो मानक लिमिटेड वारेन्टी समावेश गर्दैन वा निम्न द्वारा सीमित छ:
1 उत्पादन उज्ज्वल वा एक अधिकृत उज्ज्वल वितरक वा बिक्रेता देखि खरिद छैन।
2. श्रम वा यात्रा स्थापना, सेट-अप, मर्मत, समायोजन लागि लागत सेटिङहरू, हटाउने, पुन: स्थापना वा ग्राहक द्वारा व्यय अन्य श्रम लागत प्रदर्शन गर्न।
3. ढुवानी वितरण समय र उपलब्धता मूल र गन्तव्य आधारित फरक हुन सक्छ। हामी PO Box र APO / FPO बक्स ठेगाना गर्न उद्धार गर्न असमर्थ छौं।
4 भाडा लागत ग्राहक द्वारा व्यय।
5 भएको सिरियल नम्बर defaced गरिएको छ, परिमार्जन वा हटाइएको कुनै उत्पादन।
resold कि गएको छ, हस्तान्तरण, भाडामा, चार्टर, हराएको, चोरी वा वेवास्ता6उत्पादन।
7 कुनै पनि सफ्टवेयर सहित तर अपरेटिङ सिस्टम मात्र सीमित छैन।
8 क्षति, गिरावट वा इनकार परिणामस्वरूप:
ए दुर्घटना, दुरुपयोग, दुरुपयोग, बेवास्ता गर्ने, अनुचित वेंटिलेशन र ठंडा, आगो, पानी, प्रकोप, बिजुली वा प्रकृति को अन्य कार्यहरू, धुवाँ जोखिम (चुरोट वा अन्यथा), अनधिकृत उत्पादन परिमार्जन (एक अनधिकृत माउन्ट प्रयोग सहित), वा असफलता उत्पादन संग आपूर्ति निर्देशनहरू पालना गर्न।
बी मर्मत, वा प्रयास मर्मत, उज्ज्वल भन्दा अन्य जोकोहीले।
सी समयमा उत्पादन गर्न कुनै पनि क्षति वा ढुवानी कारण।
डी स्थापना, हटाउने, उत्पादन को ग्राहक द्वारा disassembly र reassembly समयमा कुनै पनि क्षति।
ई बिजुली उतार चढाव वा विफलता रूपमा, उत्पादन बाह्य गराउनुहुन्छ।
आपूर्ति वा भागहरु को एफ प्रयोग बैठक छैन उज्ज्वल को विनिर्देशों।
जी सामान्य वेयर र आंसू र सामान्य पिक्सेल स्तर गिरावट-बाहिर राम्रो पिच एलईडी प्रविधि संग सम्बन्धित।
एच ग्राहक सहित तर किनारा मार वा अगाडि साथ scratching देखि परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त एल ई डी सीमित छैन, दोष कारण।
आई भारी contrasting स्थिर सामग्री संग भिडियो पर्खाल दीर्घकालीन 24/7 सञ्चालन कारण कुनै पनि गैर-एकरूपता।
जहाँ एक समय तालिका उत्पादन को नियमित मर्मतका लागि निर्दिष्ट उत्पादन प्रयोगकर्ता गाइड मा उल्लेखित रूपमा मर्मतसम्भार प्रक्रियाहरु पालना गर्न जे विफलता।
K. अन्य कुनै कारण सामाग्री वा कारीगरी मा एक दोष सम्बन्धित छैन।
एल प्रयोगकर्ता गाइड मा यसो सुझाव सामान्य उपयोग अवस्था बाहिर प्रदर्शन संचालन।
एम सफ्टवेयर वा सहायक इनकार।
विविध रिटर्न मुद्दा
1 हामी फर्के उत्पादन स्वीकार गर्दैन।
2. दोषपूर्ण उत्पादन फर्के र ग्यारेन्टी देखि बहिष्कृत गर्न माथि दिइएका बहिष्करण को कुनै पनि अन्तर्गत निर्धारित गरिएको छ भने, हामी MSRP भन्दा बढी छैन ग्राहक राशि चार्ज गर्न अधिकार छ।
3. उत्पादन फिर्ता गरिएको छ र एक कुनै दोष मिली (NFF) एकाइ निर्धारण गरिएको छ भने, हामी उज्ज्वल द्वारा व्यय कुनै पनि लागत लागि ग्राहक चलानी गर्न अधिकार छ।
4 यो दोषपूर्ण उत्पादन राम्ररी पैकेज र RMA नम्बर prominently प्रदर्शित संग ग्राहक सेवा प्रतिनिधि द्वारा प्रदान ठेगाना यो जहाज ग्राहक को जिम्मेवारी हो। यस दोषपूर्ण उत्पादन राम्ररी प्याकेज छ भने र उज्ज्वल आफ्नो फिर्ती समयमा ट्रान्जिट मा क्षतिग्रस्त छ, ग्राहक भने repairable, कि त मरम्मत लागत लागि चार्ज हुन सक्छ, वा प्रतिस्थापन उत्पादन को MSRP।
5 प्रतिस्थापन भागहरु वा उत्पादन मूल उत्पादनको ग्यारेन्टी वा लामो छ whichever ढुवानी को मिति देखि 90 दिन को शेष मान गर्नेछ।
6 ग्राहक प्रतिस्थापन भाग वा उत्पादन उज्ज्वल द्वारा र फर्के बिग्रेको भाग वा उत्पादन उज्ज्वल को सम्पत्ति हुन्छ कि बुझाइएको राख्ने सहमत छ।
स्थानीय कानून को प्रभाव
यो मानक लिमिटेड वारेन्टी विशिष्ट कानुनी अधिकार दिन्छ, र तपाईं ईलाका देखि ईलाका गर्न फरक हुन सक्छ भनेर अन्य अधिकार हुन सक्छ। केही इलाकों टैग: वारंटी मा सीमितता अनुमति छैन वा incidental वा परिआउने नोक्सान को बहिष्करण अनुमति छैन, त्यसैले माथिको सीमितता र बहिष्करण तपाईं लागू नहुन सक्छ।